Ukutshaja i-smartphone yethu kwi-USB yoluntu ngumbono ombi kakhulu | Iindaba zeGajethi
Ibhetri ye-Smartphone iyaqhubeka ukubakho, kwaye okwangoku iya kuqhubeka ukubayingxaki, eya kusinyanzela ukuba sihlawulise isixhobo yonke imihla ebusuku. Kodwa ngamanye amaxesha, kuxhomekeke ekusetyenzisweni nakwimo yebhetri, isenokuba semini okanye emva kwemini sikumanqanaba asezantsi.
Kumaziko okuthenga, iivenkile zokwenza ikofu, izikhululo zeenqwelo moya kunye nezinye iindawo esinazo kumazibuko ahlukeneyo e-USB sivumele ukuba sihlawulise i-smartphone yethu kangangexesha elithile, esiyibona iyimfuneko, ukuze sikwazi ukuqhubeka nokuhamba. Ingxaki kukuba awazi ukuba sidibanisa phi i-smartphone yethu, nokuba itshaja okanye ikhompyuter inokufikelela kwi-smartphone yethu.
Ekuqaleni singacinga ukuba olu hlobo lwenkonzo lulungile kakhulu, kodwa ukuba asiyeki sicinge umzuzwana, yintoni ekuqaleni ebonakala ngathi ilifti ye-smartphone yethu, kwaye kuthi ngokubanzi, iba ngumcimbi wokhuseleko nemfihlo, kuba asazi ngokwenene ukuba ngubani okanye ngubani osemva kwentambo esiqhagamshela kuyo i-smartphone yethu, ke ngoko, ukunika phantse yonke imvume kuyo.
1 Yintoni ebangela amazibuko e-USB kawonke-wonke?
2 Ungaziphepha njani iingxaki zokhuseleko kwii-USB zikawonkewonke
3 Isisombululo kwiingxaki zebhetri
Yintoni ebangela amazibuko e-USB kawonke-wonke?
Inkampani i-Kaspersky yaqhuba uphando ngo-2014, apho yaqinisekisa khona ukuba kanjani Yonke ingcaciso ngesixhobo, i-Android, iFowuni yeWindows okanye i-iOS inokufikelelwa ngokudibanisa kwizibuko le-USB Ukutshaja, kwezi sizifumana kumaziko okuthenga nakwezinye iindawo zoluntu, kuba ngazo, unokufikelela kwisiphelo sonke, ube nokufikelela kulwazi lwenkqubo ye-smartphone edibeneyo, idatha yobuqu yekhompyuter, izinto zecomputer ...
Ungaziphepha njani iingxaki zokhuseleko kwii-USB zikawonkewonke
Olu hlobo lolwazi sisiqalo nje, kuba sinokufikelela kuyo yonke idatha, ebhalwe ngokufihlakeleyo okanye engagcinwanga kwi-smartphone yethu, ke ukuba sizifumana sisebenzisa i-USB yoluntu, kufuneka sithathele ingqalelo uthotho iingcebiso.
Cima ifowuni ngamaxesha onke. Ngokuyicima, asibathinteli kuphela ekufikeleleni kulwazi olugcinwe kwisiphelo sethu, kodwa siya kwenza ukuba i-smartphone yethu ihlawuliswe ngokukhawuleza kunokuba siyivulile kwaye siyayisebenzisa.
Ukuba sifuna ukuvula i-smartphone, okanye asinakukhetha kuba silindele ukufumana umnxeba okanye umyalezo, kufuneka sizame sukuvula ifowuni, Isizathu esinokuququzelela ukufikelela kwi-smartphone yethu, ukuba umntu othile usemva kwesango lokutshaja.
Sebenzisa usetyenziso njengeLastPass okanye igama elingu-1Password khusela lonke ulwazi olubalulekileyo olugcinwe kwi-smartphone yethu, ukuze bakwazi ukufikelela kwi-smartphone yethu, ulwazi olufunyenweyo lubhalwe ngokufihliweyo kwaye abanakho ukufikelela ngalo nangaliphi na ixesha.
Ukuba yi-smartphone ye-Android, ayitsho ngaphandle kokuba i-smartphone yethu kufuneka ihlale icocekile kwizicelo ezinokuthi kubeka umngcipheko wokhuseleko. Eyona ndlela yokwenza oku kukufaka kuphela usetyenziso olukhoyo kwiVenkile yokuDlala, ukongeza ekungavumeli ukufakwa kweMithombo engaziwayo, efumaneka ngaphakathi kuseto lokhuseleko.
Ukuba nangaliphi na ixesha, xa uqhagamshela i-smartphone yethu kwizibuko le-USB, usibuza ukuba ngaba sifuna ukunika ukufikelela kulo naluphi na uhlobo lolwazi malunga nalo, Kuya kufuneka unqabe ngokupheleleyo, kuba akukho xesha apho ufuna itshaja elusizi okanye isixhobo somntu wesithathu ukwazi apho sikhona, ukufikelela kubafowunelwa bethu, iifoto, ukubiza imbali ... Oku kuhlala kuyinto eqhelekileyo ekufumaneni izithuthi eziqeshisayo, ukusukela ngokuxhomekeka ekubeni zeziphi iinkampani, sinokuba ngumthombo obaluleke kakhulu wolwazi esinokurhweba ngalo kwixa elizayo.
Ukongeza koku kungasentla, ukuba sithatha isigqibo sokudibanisa idatha kunye nenkqubo yemultimedia yesithuthi esiqeshisayo, kuba siza kuyisebenzisa ixesha elide kwaye sifuna ukonwabela intuthuzelo esisinika yona, kufuneka soloko ukhumbula ukucima yonke idatha ehambelana nesixhobo esingqameneyo.
Njengoko ubonile, akufuneki ube yingqondi okanye ingcali kwezokhuseleko, ukwazi ukuba yeyiphi imingcipheko esinokuthi siyifumane xa sisebenzisa izibuko lokutshaja nge-USB lalo naliphi na iziko likarhulumente esilisebenzisayo. Kuya kufuneka sihlale silufunda lonke ulwazi oluboniswayo kuthi kwiscreen ngalo lonke ixesha siqhagamshela i-smartphone yethu kwitshaja yolu hlobo, kuba inkqubo yokusebenza ngokwayo iphethe ukunika okanye ukuvuselela iimvume ngokuthanda.
Isisombululo kwiingxaki zebhetri
Kule meko, nini ibhetri yangaphandle, Iibhetri ezitshiphu ngoku kwaye esinokuzifumana kwii-euro ezili-10 ezinomthwalo olungileyo, iba yinto ekufuneka sonke siyiphathe, kungenjalo sifuna ukubambeka kwaye sinqunyulwe kuba siphelelwe yibhetri.
Enye into ekufuneka siyithathele ingqalelo iyafumaneka kunxibelelwano I-Wifi yoluntu engakhuselekanga, ethi, njengomgaqo ngokubanzi, ifumaneke kwiindawo ezifanayo apho kukho ii-USB zikawonke-wonke. Ixesha elide kangangoko kunokwenzeka, kufuneka sikuphephe ukusebenzisa olu hlobo lolwazi ngalo lonke ixesha, ukunqanda umhlobo wakho ngaphandle, ekufikeleleni kwiipassword zeenkonzo esizisebenzisayo nangaliphi na ixesha, njenge-Facebook, izicelo zebhanki, njl. Ukuba siza kuyisebenzisa kuphela ukubonisana neSafari okanye ukuthumela omnye umyalezo kumaqonga ahlukeneyo emiyalezo akusayi kubakho ngxaki kwezokhuseleko, ingekho kuthi nakuthi. Okwangoku, zama ukubaphepha kangangoko kunokwenzeka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ukutshaja i-smartphone yethu kwi-USB yoluntu ngumbono ombi kakhulu
Indoda ikwazile ukuyiguqula imodeli yayo yeTesla S kwi-cryptocurrensets zam